Abanye ababhali abasuka kwindawo eseLa Mancha ebizwa ngokuba yiLa Solana | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, I fantasy, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Inoveli yothando, Imibongo, Ithiyetha
Ifoto ka (c) uCarlos Díaz-Cano Arévalo. Umfanekiso oqingqiweyo kaDon Quixote ujikeleze eLa Solana (eCiudad Real).
Solana Yidolophu ekwiphondo laseCiudad Real, eLa Mancha ngaphezulu La Mancha, kunye intombazana yasekhaya. Ibekwe kwi Intsimi yeMontiel, Sinabamelwane beedolophu ezintle zase IVillanueva de los Infantes, iValdepeñas okanye iTomelloso. Siphose ilitye ukusuka kwipaki entle yendalo yaseLas Amachweba eRuidera. Ngamanye amagama, asiswele iwayini elungileyo, itshizi ebalaseleyo, imihlaba yezinto ezahlukileyo kunye nobugcisa kwiikona ezincinci zeedolophu ezininzi. Ayisiyiyo eyona ndlela yokubhala yemvelaphi kuba sikwi Umhlaba waseDon Quixote.
Ke eLa Solana sinayo malunga mangaphi amagama oonobumba abakhulu bendlela kunye nodumo. Sihlakulela amasimi ethu kwaye sikhulisa isihobe, ulutsha kunye noncwadi lwabantwana, imidlalo yeqonga kunye nenoveli. Ndisandula ukujoyina eli qela likhethiweyo kwaye, njengoko ndonwabile kakhulu, ukusuka apha ndifuna ukwenza irhafu encinci kunye nefestile yedolophu yam kwilizwe loncwadi.
1 USantiago Romero waseAvila
2 ULuis Diaz-Cacho Campillo
3 ULuis Romero waseAvila
4 UMiguel Garcia de Mora
5 UCarmen Hergueta
6 UAntonio García-Catalan
7 UFrancisco Hergueta
8 Isitayile seTomi
9 UMariola Diaz-Cano Arevalo
10 Amanye amagama
USantiago Romero waseAvila
Imbongi, umsebenzi wakhe oqaqambileyo iminyaka emininzi kudala bayenza enye ye Ubuninzi bezalathiso zoncwadi Solaneros. Kodwa udumo lwakhe lugubungela lonke elaseSpain. Ophumelele amabhaso angenakubalwa, sele ekwincwadi yakhe yesihlanu enesihloko esithi Ukungcangcazela kovuyo kunye nobumsulwa. Yi Ukuhlanganiswa kwemveliso yakhe yemibongo yaphuhliswa ngaphezulu kweminyaka engamashumi amane. Kubandakanya imisebenzi yokuphumelela amabhaso kunye nezinye esele zipapashiwe kwiincwadi zangaphambili. Kodwa uninzi alushicilelwanga. Enye impumelelo ngakumbi kolo luhlu olungapheliyo kunye nokwamkelwa.
ULuis Diaz-Cacho Campillo
Ilungu elidibeneyo leqela loncwadi iPan de Trigo yeLa Solana okoko yadalwa ngo-1989, yiyo I-alderman yangoku yendawo. Kodwa ukungazinzi kwezopolitiko kunye noxanduva lwesikhundla sakhe kumshiya nexesha lomsebenzi wobugcisa owaziwayo.
Kukwanjalo ilungu lombutho wababhali beCastilla La Mancha. Upapashe iincwadi ezininzi zombini kwaye eneembongi ezininzi kunye nababhali belanga abanjengo Nemesio De Lara Guerrero kunye noLuis Romero de Ávila. Ezinye zezihloko zakhe zezi Kwilifu lam lomqhaphu (1994) Ukukhangela igama lakho (1998) Iileta zothando eziya kuwe (2001) Ukubonakaliswa komzuzu (2004) Iileta zothando ezivela eToledo (2009) okanye Imibongo yokuphila yonke imihla (2010). Incwadi yakhe yamva nje epapashiweyo yile Iileta zothando zikaMavi (1992-2017).
ULuis Romero waseAvila
Uhleli ebhala, ukongeza ngaphandle ngothando lwakhe lokudlala kunye nomculo. Kukwanjalo ilungu lomququzeleli weQuintería kunye nePan de Trigo. Ufumene ngaphezulu amabhaso angamashumi amane oncwadi kwaye ipapashe iincwadi zemibongo: Isipho sokuKhanya (1994) Imifanekiso yoBomi (2004) … Kananjalo iipilisi zokusila ziyaphupha Kunye nomhlobo wakhe uLuis Díaz-Cacho Campillo (2008), phakathi kwabanye.
UMiguel Garcia de Mora
Umbhali odumileyo, intatheli kunye nembongi USolanero ngokwamkelwa, uMiguel García de Mora Gallego naye wayengumntu obaluleke kakhulu kwinkcubeko yesolanera. Kulo nyaka abantwana bakhe uGloria noLuis Miguel bapapasha Iimbali kunye neendaba zothando kwaye zihlala zihlala, ukudityaniswa kwamaninzi amanqaku ipapashwe ngutata wakhe kwiminyaka engama-72 yobomi bakhe eLa Solana.
Umbhali oselula Uligqala esele likhona kuncwadi. Ngomdlandla omkhulu nomnqweno, sele epapashe iinxalenye ezimbini zelinye trilogy eboyisile abafundi be uhlobo lwentelekelelo, kunye nencwadi yamabali. Kwaye uneeprojekthi ezininzi ezisalindelwe. I-trilogy inesihloko Umlingo wehlabathi ezimbini kwaye, kusalindwe ukugqitywa, ngo-2015 icandelo layo lokuqala lapapashwa, Amehlo eglasi, kwaye kunyaka ophelileyo ibingowesibini, Iphupha elimnyama. Y Ukuhambahamba... ngayo cYenziwe yenoveli emfutshane, ibali elide kunye namabali amafutshane aliqela kwizihloko ezininzi ezinomdla kumbhali.
Omnye umbhali we-solanero osandula ukuhambisa incwadi. Kukwanjalo ilungu lePan de Trigo, kwaye ukubhala kwakhe bekusoloko kugxile kwi Imveliso yeqonga lwalo naluphi na uhlobo: abadlali, oonopopi, izinto, iimonologues, ababalisi bamabali okanye imidlalo yerediyo Upapashe umdlalo ohlekisayo, Iiyure ezintlanu kunye neAmancio, ngokunqwala okucacileyo emsebenzini kaDelibes kwaye umbhali uchaza oku ngokuthi "kukungafani kokubhaliweyo kwasekuqaleni."
UFrancisco Hergueta, Umntu ophakamisa ubomi bakhe bonke kunye nomfundi okhutheleyo kunye nomlandeli wohlobo oluhle, wagqiba ekubeni abhale amabali akhe kwaye ngoku umboniso wenoveli ebalaseleyo, yamaphupha kunye nenoveli ye-adventure. Oko kuzonwabisa kunye nokuthanda kuye kwamkhokelela ekubeni enze omnye wabalinganiswa abahlala bexhamla abathandi bohlobo, Umphathi u-Ernesto Sacromonte. Iinjongo zakhe ngenkulungwane ye-XNUMX ziphuhlisiwe kwiincwadi ezimbini ezinesihloko Ndifunga isifungo sokunyaniseka kuwe y Ndifunga ukuziphindezela, Ngomxholo ongezantsi weThe Legend of Ernesto Sacromonte.
Lo Madrilenian ngokuzalwa kodwa solanera yobomi bonke IsiNgesi philologist kwaye waphumelela ibhaso lakhe lokuqala lesizwe lokubalisa eneminyaka elishumi elinesixhenxe ubudala. Kutshanje ndizise Ibali labantwana boovulindlela, iilwimi ezimbini, iboniswe nguIsabel Carmona kunye netekhnoloji ye nyaniso eyongeziweyo isihloko Ukudibana (Ukudibana). Ijolise kubantwana be phakathi kweminyaka engama-7 ukuya kwengama-12 kwaye inika ithuba lokumamela isicatshulwa kwiilwimi ezimbini ngokwahlukeneyo.
I-Oui, yeyona moi kwaye ndifikile kule klabhu yababhali be-solaneros. Ndenza ukuqala kwam kwihlabathi loncwadi ngenoveli yokuqala abandipapashayo, Marie. Kodwa zininzi nezinye ezo zisalindelwe. Isipelingi kunye nesitayile sokufunda iimpazamo kunye nomguquleli kunye nolwazi lokuhlela, ndibhala njengabanye abaninzi ukusukela ebuntwaneni. Inkqubo ye- ukubetha kwethamsanqa oko kuthetha ntoni Marie ikwangumbono ongekhoyo womntu othi, nangona iminyaka ibhaliwe, kubonakala ngathi uqalile nje.
Kuba baninzi ngakumbi abafana naye Umbhali osemthethweni kaLa Solana, umbhali-mbali kunye nentatheli uPaulino Sánchez, iziko lendawo liphela elidla umhlala-phantsi kulo nyaka. Baye nabo Umbhali oselula uJulián Simón, ebisandula ukwenziwa Intaba yeMeditera, Isibongozo malunga nobutyebi bendalo obusingqongileyo. Okanye imbongi eyaziwayo Isabella del rey, kunye nencwadi yakhe yakutshanje enesihloko Iivesi zesikolo.
Mhlawumbi ndishiye enye kwaye ndicela uxolo ngayo. Ndijonge phambili ekuqhubekeni ndibhala amanqaku malunga nababhali belanga bexesha elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Abanye ababhali abasuka kwindawo eseLa Mancha ebizwa ngokuba yiLa Solana
Udliwanondlebe noIsabel Coixet kwifilimu yakhe yamva nje "Ithala leencwadi" esekwe kwincwadi kaPenelope Fitzgerald